कोरोना काल र शिक्षाको आवश्यकता – Shirish News
कोरोना काल र शिक्षाको आवश्यकता
कोरोना कालमा जनताले भोग्दै गरेका सास्तीको गहन मूल्यांकन गरी निवारणको बाटो अबिलम्ब औल्याउन सकेन भने देशमा भिषण संकटको वादल न छाउला भन्न सकिदैन। कोरोनाको आयु कति हो या कतिका दिन सम्म यसले आफ्नो ताण्डव देखाउलान् दुनिया नै अनभिज्ञ छ। यस्तोमा विकल्प नखोजी संसार चलायमान हुन सक्दैन। जहाँ आम जनजीवन नै ठप्प परेका छन्।
सरकारद्वारा घोषित बन्दाबन्दी त कोरोनाबाट जोगिने कथित एक उपाय मात्र हो। र यसलाई उपायको रूपमा नै स्वीकार गरेर गयौ भने यसबाट सधैको लागि मुक्त हुने आधार के त? जब कि हाम्रो परिपेक्षमा कोराना संक्रमितको संख्या दिनानु दिन क्रमशः बढ्दै गएको कुरा तथ्यांकले देखाउदै छ।
अबको उपाय के त? के यसरी नै आत्मसमर्पण गरेर जाने हो त? सरकारले सोच्नै पर्ने हो। निकास खोज्नै पर्ने हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार कोरोनाको असर दशकौ रहन्छ रे! खोप आउदा पनि यसको प्रकोप खत्म हुदैन। अब सोचौं यस्तोमा जीवन कसरी अगाडी बढ्लान। रोगसंग समझौता गरेर अगाडी बढाउने हो कि भोकसंग। जबाफ सजिलै पाइदैन। तर भौतिक दुनिया चलायमान राख्न कुनै न कुनै विकल्प त रोज्नै पर्छ। कस्तो विकल्प रोज्ने हो सरकारले उपाय खोज्नै पर्छ। र जति चाडो खोज्न सक्यो जीवन उतिनै सहज हुन्छ।
देशको अवस्था दैनीय बन्दै गएको कुरा कसैबाट अछुतो छैन्। समय आफ्नो गतिमा फड्को मारे पनि उपलब्धि न्यून छ। आय आर्जनको स्रोत जति पनि ठप्प छन्। सबै क्षेत्रको जननी, शिक्षा क्षेत्र पनि आफ्नो गति लिन सकि रहेको छैन् ।जुन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने मध्येको एक संवेदनशील क्षेत्र हो। अरू क्षेत्रको घाटालाई कुनै न कुनै तवरले भरपाई गर्न सकिएलान तर शिक्षा क्षेत्रको छतिलाई कदापि गर्न सकिदैन। जसको मोल राज्यले चाहेर पनि चुकाउन सक्दैन।
एक आर्थिक वर्षमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुनु भनेको राष्ट्र सोचेको भन्दा पछाडी धेकेल्नु हो। अतः सरकारले शिक्षा विज्ञहरूसंगको परामर्शबाट तत्कालै उचित निष्कर्ष निकाल्नुको अर्को विकल्प पनि छैन्।
अहिले अभिभावकहरूमा एउटा गलत संदेश संप्रेशन भएको अवस्था चौतर्फी देखिन्छ। ज्यान रहे शिक्षा जति पनि लिन पाईन्छ। सहमत हुदै भन्न चाहन्छु ” शिक्षा नै यस्तो चिज हो जुन किनेर पाईदैन”। एउटा विधार्थीको जीवनमा शिक्षा प्रदत्त एक एक सेकेन्डको महत्व हुन्छ भने कुरालाई नकार्न पनि मिल्दैन। भौतिक जीवनमा अरू थोकको विकल्प होला तर शिक्षाको विकल्प खोजेर पनि पाईदैन।
तसर्थ सरकारले यस्ता खालका नकारात्मक सोचाईलाई संबोधन गर्नै पर्ने देखिन्छ। सुरक्षाको अनुभूति गराउनै पर्ने बुझिन्छ। शिक्षाबाट वंचित कोई न होस् र कोई पनि नरहोस्।
-लेखक कापरी प्याब्सन क्षीरेश्नवरनाथ नगर इकाइ समितिका अध्यक्ष हुन् ।